Fampaherezana ny vehivavy, ny lehilahy
Ny fiarovana dia mahomby indrindra rehefa afaka mamaritra sy manova azy ireo ny olona rehetra voakasiky ny fitsipika. Saika ny antsasa-manilan'ny vehivavy no mandray anjara amin'ny jono kely amoron-tsiraka manerana ny tany mafana - na misambotra trondro, na manodina vokatra na mivarotra eny an-tsena. Saingy matetika ny feon'izy ireo dia tsy hita ao amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fiarovana.
Ny fandraisan'ny vehivavy anjara dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny fiarovana amin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa, ny fanarahan-dalàna, ny famahana ny fifandirana ary ny fandraisana andraikitra. Rehefa mahazo fivelomana tsara kokoa ny vehivavy dia mahazo tombony koa ny fianakaviany sy ny fiaraha-monina.
Miasa izahay hanohana ny firotsahana ara-drariny eo amin'ny fiaraha-monina amin'ny fiarovana ny ranomasina, amin'ny fanekena ny anjara asa lehibe ananan'ny vehivavy sy ny tovovavy amin'ny jono nentim-paharazana.
Fantatsika ihany koa fa ny fitovian'ny lahy sy ny vavy dia mihoatra noho ny fanomezana hery ny vehivavy. Ho fanampin'ny hetsika mikendry ny hanangana ny safidiny, dia mandray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fitsipiky ny lahy sy ny vavy izahay ary miasa ao anatin'ny rafitra eo an-toerana mba hampitomboana ny solontenan'ny vehivavy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra.
Fananganana masoivoho vehivavy
Ny asantsika dia manome hery ny vehivavy amin'ny fanofanana azy ireo hanara-maso ny jono sy hampita vaovao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy amin'ny endrika azo takarina. Ity fomba fiasa ity dia mametraka ny angona sy ny fomba fijery eo am-pelatanan'ny vehivavy eo an-toerana, manokatra ny lalana ho azy ireo handray anjara mavitrika amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fitantanana.
Ny asantsika amin'ny fampihenana ny fatiantoka aorian'ny fijinjana sy ny fitazonana ny kalitao dia zava-dehibe indrindra amin'ny fanatsarana ny fanjarian-tsakafo ho an'ny vehivavy sy ny ankizy, ary ny fampivoarana ny fidiram-bolan'ny vehivavy. Manamafy izany izahay amin'ny alàlan'ny rafitra ara-drariny amin'ny fitahirizana sy fampindramam-bola mba ahafahan'ny vehivavy mampiasa vola amin'ny tenany, ny fivelomany ary ny fianakaviany.
Ny fivelomanay sy ny fandaharan'asa momba ny fahasalaman'ny vondrom-piarahamonina dia mikendry manokana ny vehivavy, manolotra azy ireo karazana fandrindram-pianakaviana sy mampitombo ny fahaleovantenany ara-toekarena. Ireo hetsika ireo dia manampy amin'ny fananganana masoivoho vehivavy, manome fototra mafy orina hanohanana ny fandrosoana mankany amin'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy.
Manohana ny lehilahy hisaintsaina ny andraikitry ny lahy sy ny vavy
Fantatsika fa ny fitovian'ny lahy sy ny vavy dia mihoatra noho ny fanomezana hery ny vehivavy. Ho fanampin'ireo hetsika mikendry ny hanorina ny safidiny, dia miara-miasa amin'ny lehilahy ihany koa izahay mba hamporisika ny fisaintsainana momba ny fomba nentim-paharazana momba ny lahy sy ny vavy, ary hiasa amin'ny fanovana ireo rafitra efa misy mba hanomezana anjara toerana mitovy kokoa ny vehivavy.
Fampitomboana ny solontenan'ny vehivavy amin'ny fanapahan-kevitra
Ny fomba fiasantsika koa dia miatrika ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy amin'ny alalan'ny fanomezana hery ny vehivavy hanana anjara toerana manan-danja amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Manome fiofanana mifanaraka amin'ny fahaiza-mitarika, kabary ampahibemaso, fitantanana ny jono mandray anjara ary ny fahaiza-manao ara-teknika mifototra amin'ny asantsika izahay vehivavy.
Miasa izahay mba hampitombo ny fisoloan-tena ho an'ny vehivavy eo amin'ny fiarovana an-dranomasina eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fanomezana fahafahana ireo sehatra fifanakalozan-dresaka ho an'ny vehivavy ihany, ary manohana ny vehivavy handray anjara amin'ny fikambanan'ny mpitantana ny harena voajanahary amin'ny maha solontena voafidy azy.
Izahay koa dia mampandroso ny politika sy ny fomba fanao amin'ny fanaratoana nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny tambajotra sy ny fiaraha-miasa amin'ny jono. Ity fomba fiasa ity dia tsy mitodika amin'ny tsy fitoviana fotsiny, fa mahatonga ny fitantanana an-dranomasina matanjaka kokoa sy mahomby kokoa.
Eto Madagasikara, ny hetsika fiompiana trondro ataonay dia manome fahafahana ny vehivavy hamboly ahidrano sy kôkômbra: vehivavy ny antsasany mahery amin'ny tantsaha rehetra.
Taorian'ny fitsidihana fifanakalozam-pianarana tany Zanzibar, nanangana fikambanam-behivavy ihany ireo vehivavy mpanjono ao Kaomoro ary nanetsika ny tanànany mba handamina ny fanakatonana ny jono mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina voalohany ao amin'ny firenena ao amin'ny nosy Anjouan, modely izay naverina naverina nanerana ny nosy.
Ny solontenan'ny vehivavy eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra dia afaka miantoka fa ny fepetra fitantanana ny jono dia natao mba hahazoan'ny rehetra tombony. Ohatra, ny fanokafana indray ny fanakatonana ny jono any Tanzania dia nifanindry tamin'ny onjan-dranomasina ambany indrindra mba hahafahan'ny vehivavy mitsimpona an-tongotra eny amin'ny haran-dranomasina ary mandray anjara amin'ny fitomboan'ny trondro.
Manomboka any Tanzania ka hatrany Timor-Leste, mahazo fahaiza-manao vaovao sy fahatokiana bebe kokoa ny vehivavy mpanangona angon-drakitra afaka mandray anjara amin'ny fitantanana an-dranomasina eo an-toerana.
Taorian'ny 15 taona mahery niarahana tamin'ny fiaraha-monina tany atsimoandrefan'i Madagasikara, dia mihoatra ny ampahatelon'ny solontenam-pokonolona voafidy ao amin'ny komity mpitantana eo an-toerana miandraikitra ny fitantanana ny faritra arovana an-dranomasina Velondriake ny vehivavy. Izany dia mifaninana amin'ny ankamaroan'ny rafitra ara-politika any andrefana amin'ny resaka fampidirana.
Ny vondrona miasa amin'ny lahy sy ny vavy dia mampivondrona ireo mpiara-miasa miasa amin'ny sehatra isan-karazany mba hizara fianarana sy fomba fanao mahomby, hananganana fomba fijery mihetsiketsika sy manova ny lahy sy ny vavy manerana ny asantsika.